Maalinta: Maarso 12, 2017
Jidka tareenka ee Canikli
Khadka tareenka ee 'Canikli': Khadku wuxuu bilaabay wadahadal 'toosan / taagan' ee tareenka ugu dambeeya. [More ...]
Channel-ka 20 ayaa dhammaadka sannadkan dhammaadka
Boqolkiiba 20 ee Kanal Istanbul ayaa la dhammeystiri doonaa sanadkan: Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta ayaa dejisay yoolal muhiim ah sanadkaan shaqadeeda ku saabsan mashaariicda waaweyn. Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta [More ...]
Maxay u dhimanayaan shaqaaluhu madaarka saddexaad? [More ...]
Haweeneyda Naafada ah ee Naafada ah Kuma Raaci Karto Metrobus iyada oo la raacayo Dog: Dhacdada waxaa goob joog ka ahaa muwaadin qalbi wanaagsan oo la yiraahdo Onur Yarar oo ku sugan magaalada Söğütl turnelesme metrobus Turnstiles ayaa shaaca ka qaaday fikirka 'GOOD iyo BAD' oo qaawan oo dhan. [More ...]
Tareenka xawaaraha dheereeya ee Bariga Madow ee Bariga Black wuxuu xaqiiqdii faa iidaysan doonaa: Nurettin Canikli, Samsun, Ordu, Giresun iyo Trabzon oo ku yaal gobollada Bari ee Badda Madow waxay dhab ahaantii ka faa'iidi doonaan tareenka xawaaraha sare leh, ayuu yidhi. Booqashooyin isdaba joog ah, wareysiyado iyo shirar [More ...]
Buundada 3 ee Sile waxay liqaysaa kaynta
Xiriirka burburka buundada 3aad wuxuu liqi doonaa duurka: Isbeddelka qorshihi ee isku xirka isku xirka Waqooyiga Marmara, oo bixin doona gaadiidka wadada ee buundada 3aad, waa la hakiyey. Wadada loo xushay wadada weyn waa darajada 1aad ee dabiiciga ah ee SIT [More ...]
Maanta taariikhda: 12 Maarso 1911 Railways ...
Maanta taariikhda 12 March March 1911 waxay saxiixday qandaraasyo dheeri ah oo ay la wadaagaan Jarmalka oo ku yaal Baghdad Railways. Diidmada mebuslar ayaa la tixgeliyey. Khadka Baghdad-Basra Gulf iyo bixinta dekadda ayaa la joojiyay.